सावधान ! उपत्यकामा चोरको बिगबिगी बढ्यो « Niatra TV
सावधान ! उपत्यकामा चोरको बिगबिगी बढ्यो
काठमाण्डौ, असार २ गते । राजधानीमा कुनै स्थानमा आउजाउ गर्दा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पाकेटमार तथा चोरदेखि सावधान ? राजधानीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई टार्गेट बनाएर समुहमै चोरी गर्ने गिरोह सकृय छन् । प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा काठमाडौंमा चोरी गर्नेको संख्या डरलाग्दो रूपमा बढेको देखिएको छ ।